Job 3 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Job bụrụ ụbọchị a mụrụ ya ọnụ (1-26)
Ọ jụrụ ihe mere o ji na-ata ahụhụ (20, 21)
3 Ọ bụ mgbe ihe a mechara ka Job kwuziri okwu ma bụọ ụbọchị a mụrụ ya ọnụ.*+ 2 Job sịrị: 3 “M na-abụ ụbọchị a mụrụ m ọnụ,+Nakwa abalị ahụ mmadụ sịrị, ‘A dịla ime nwa nwoke.’ 4 Ka ụbọchị ahụ gbaa ọchịchịrị. Ka Chineke chefuo ya. Ka ìhè gharakwa inwu na ya. 5 Ka oké ọchịchịrị gbachie ya. Ka urukpuru kpuchie ya. Ka oké ọchịchịrị kpuchie ìhè ya. 6 Ka oké itiri gbaa n’abalị ahụ.+ Ka a ghara ịṅụrị ọṅụ n’ụbọchị ahụ n’ime ụbọchị ndị e nwere n’afọ,Ka ọ ghara iso n’ụbọchị ndị e nwere n’ọnwa. 7 N’eziokwu, ọ gaara aka mma ma a sị na e nweghị onye a mụrụ n’abalị ahụ. Ka a ghara iti mkpu ọṅụ na ya. 8 Ka ndị na-abụ ụbọchị ọnụ bụọ ya ọnụ,Bụ́ ndị nwere ike ịkpọte Agụ Iyi.*+ 9 Ka kpakpando nke pụtara mgbe chi malitere iji n’abalị ahụ gbaa ọchịchịrị. Ka o chere ìhè, ma ka ìhè ghara ịdị,Ka ọ gharakwa ịhụ ìhè na-apụta ma chi bọwa. 10 N’ihi na o mechighị akpa nwa nne m,+O meghịkwa ka m ghara ịhụ nsogbu. 11 Gịnị mere na anwụghị m mgbe a na-amụ m? Gịnị mere na anwụghị m mgbe m si n’akpa nwa pụta?+ 12 Gịnị mere mama m ji kuru m n’ụkwụ ya,Nyekwa m ara ka m ṅụọ? 13 N’ihi na ugbu a, m gaarala edinara ala n’enweghị onye na-enye m nsogbu.+ M gaarala na-ehi ụra, na-ezukwa ike,+ 14 Mụ na ndị eze ụwa na ndị na-adụ ha ọdụ,Ndị ebe ndị ha rụụrụ onwe ha dakpọsịziri adakpọsị,* 15 Ma ọ bụ, mụ na ụmụ ndị eze* bụ́ ndị nwere ọlaedo,Ndị ọlaọcha juru n’ụlọ ha. 16 Ma ọ bụ, gịnị mere na ime apụghị mama m mgbe ọ dị ime m,Mụ anwụọ ka ụmụaka ndị na-ahụtụghị ìhè? 17 N’ebe ahụ, ndị ajọ omume anaghịzi echegbu onwe ha. Ndị ike gwụrụ na-ezu ike n’ebe ahụ.+ 18 Ndị mkpọrọ niile na-atụsara ahụ́ n’ebe ahụ. Ha anaghị anụ olu onye na-amanye ha ịrụ ọrụ. 19 Onye ukwu na onye nta bụ otu n’ebe ahụ,+Ohu na-enwerekwa onwe ya n’aka nna ya ukwu. 20 Gịnị mere Chineke ji ekwe ka onye na-ata ahụhụ dịrị ndụ,*Na-enyekwa ndị na-ahụsi anya ndụ?+ 21 Gịnị mere na ọnwụ anaghị egbu ndị chọrọ ịnwụ?+ Ndị na-achọ ya karịa otú e si achọ akụ̀ zoro ezo, 22 Ndị na-aṅụrị nnukwu ọṅụ,Ndị obi na-atọ ụtọ ịnwụ.* 23 Gịnị mere Chineke ji enye onye furu ụzọ ìhè,Bụ́ onye ọ gbachibidoro ogige?+ 24 N’ihi na m na-ama ọsụ kama iri ihe.+ Ude m na-asụ+ dị ka ebe mmiri na-agba n’akwụsịghị akwụsị. 25 N’ihi na ihe m tụrụ ụjọ ya abịarala m,Ihe m tụrụ egwu ya emeekwala m. 26 E nweghị mgbe obi ruru m ala. E nweghị mgbe m nọ jụụ. E nweghị mgbe m zuru ike,Kama nsogbu nọ na-abịa.”
^ Na Hibru, “bụọ ụbọchị ya ọnụ.”
^ O nwere ike ịbụ, “ndị rụụrụ onwe ha ebe dakpọsịrị adakpọsị.”
^ Ma ọ bụ “ndị ọkwá ha gbagotere n’ụlọ eze.”
^ Na Hibru, “enye onye na-ata ahụhụ ìhè.”
^ Na Hibru, “Ndị obi na-atọ ụtọ mgbe ha chọtara ili.”